Vaovao - Amin'ny fanazaran-tena amin'ny ririnina
Ity misy fampihetseham-batana feno vatana haingana azonao atao ao an-trano izay tsy mila zavatra mihoatra ny tady mitsambikina.
Ity fampihetseham-batana ity dia manana fanazaran-tena mitsambikina betsaka mba hampiakarana ny fitempon'ny fonao ao anatin'ny fotoana fohy. Ny tombony azo avy amin'ny fitsambikinana dia maro karazana: mampitombo ny fahaizan'ny ôksizena anao izany, manatsara ny fifandanjana ary manatanjaka ny fonao. Fantatrao ve fa afaka mandoro kaloria 200 ka hatramin'ny 300 eo ho eo ianao rehefa mitsambikina tady mandritra ny 15 minitra fotsiny? Tsy ratsy! Ity fitambarana fampihetseham-batana aerobika ity sy ny asa fanoherana dia manampy anao hanana fampihetseham-batana tanteraka ao anatin'ny fotoana fohy, hahafahanao mamita ny fanazaran-tenao ary miverina mamoaka ny lalanao.
Makà tady mitsambikina ary tazomy moramora ireo tahony. Ampidiro ao aorianao izany.
Mijoroa amin'ny baolina amin'ny rantsan-tongotrao amin'ny tongotrao mahitsy sy ny kiho eo anilanao. (Ny tananao no manao ilay asa fa tsy ny sandrinao.)
Avadiho eo ambonin'ny lohanao ny tady mitsambikina
Rehefa manohina ny gorodona ny tady dia mitsambikina izy ka miditra eo ambanin'ny rantsan-tongotra sy ny voditongotra ary miverina amin'ny toeran'ny fanombohana.
FANAZARAN-TENA milentika Reps HAFA
Jump Rope 1 5 minitra 45 segondra
Lunges mandeha an-tongotra 4 Dingana 50 30 segondra
hazo fisaka 3 30 segondra 30 segondra
Kavina avo 3 1 minitra 30 segondra
Pop Squats 4 25 30 segondra
Spiderman Planks 3 30 segondra 30 segondra
Mandeha amin'ny hazavana miaraka amina Dumbbells
Mitazona dumbbells roa amin'ny halavan'ny sandry eo akaikin'ny sisinao, mifanatrika ny felatananao.
Mijoroa amin'ny fijanonana mihetsiketsika ary ny tongotrao ankavanana eo aloha ary ny tongotrao havia ao aorianao.
Aondreno tsimoramora ny vatanao, amin'ny lohalika aorin-damosinao saika hikasika ny tany.
Miato kely, avy eo manosika ny voditongony hiverina amin'ny toerana misy azy.
Mandrosoa mankany aloha ny tongotra havia, ary ankehitriny ny tongotra havanana dia ao aorianao ary ampidino avy hatrany ny tenanao. Manohiza mandroso amin'ny tsipika mahitsy ho an'ireo dingana voalaza.
Manomboha amin'ny toeran'ny tosika, fa miondrika amin'ny kiho ary apetraho amin'ny sandrinao fa tsy ny tananao.
Ny vatanao dia tokony hamorona tsipika mahitsy manomboka amin'ny soroka mankany amin'ny voditongotra. (Aza atsangana ambony ny vodinao!)
Minoka ao an-kibonao ary potsero ny glute.
Tazomy ity toerana ity raha mbola torolàlana raha mbola miaina.
Fanovana — Raha sarotra loatra ny iray minitra rehefa manomboka ianao dia tazomy mandritra ny dimy segondra ary avy eo miala sasatra mandritra ny dimy segondra, avereno ity dingana ity mandra-pahatonganao iray minitra. Isaky ny mampihatra io fanazaran-tena io ianao dia miezaha hihazona ilay toerana somary lava kokoa eo anelanelan'ny fiatoana sasatra.
Fiovaovana - azonao atao ihany koa ny miala sasatra eo an-tananao fa tsy ny sandrinao
Mijoroa miaraka amin'ny tongotrao halavany tahaka ny feny. Atsangano amin'ny tratranao ny lohalika ankavananao.
Ampifamadiho amin'ny tratrao ny lohalika ankavia. Tohizo ny fihetsehana, mifandimby tongotra faingana.
Manomboha amin'ny toerana mijoro miaraka amin'ny tongotrao.
Arovy ny lamosinao ambany, ampidino ny vatanao ho lalina araka izay ahafahanao mitazona ny lohalinao amin'ny rantsan-tongotrao amin'ny squat mahazatra.
Atsofohy avy eo amin'ny voditongotrao ary mitsambikina mipoaka, mipetraha amin'ny tongotrao malalaka ary ampidino amin'ny toeran'ny squat sumo.
Aza mitsahatra mitsambikina eo anelanelan'ny toeran'ny tongotra misokatra sy mihidy.
Fanovana — mba hahasarotra azy, mitsambikina amin'ny dingana iray.
Atombohy amin'ny toerana fanosehana, fa miondrika amin'ny kiho ary apetraho amin'ny sandrinao fa tsy ny tananao.
Ento miakatra sy mankamin'ny ilanao ny lohalika ankavananao, manodidina ny hahavony.
Ahodiho ny ivonao hijerena ny lohalinao.
Avereno ny tongotrao hanombohana toerana ary avereno amin'ny ilany.